Mune 55th edition yeiyo yepamusoro 500, Japan ndiye mutungamiri uye anoshandisa ARM | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura iyo 55th edition yeiyo chinzvimbo chemakomputa mazana mashanu ane simba kwazvo yakaburitswa munyika uye mushanduro iyi nyowani ichienzaniswa neiyo yapfuura (unogona kuitarisa mune inotevera chinongedzo) Japan inotungamira uye inoenda kuUnited States kunzvimbo yechipiri.
Uye izvo zviri muchikamu ichi chaJune iyo yeJapan Fugaku sumbu ndiye mutungamiri uye anoyemurika pakushandiswa kwemaARM processor.
Sumbu re Fugaku anogara muRIKEN Institute yePhysical and Chemical Research uye inopa goho re415.5 petaflops, iri 2.8 kupfuura mutungamiri weiyo yapfuura chinzvimbo.
Sumbu inosanganisira 158976 node dzinovakirwa paFujitsu A64FX SoC, Yakagadzirirwa 8.2-musimboti SVE Armv48-A CPU (512-bit SIMD) ine wachi yenguva ye2.2 GHz.
Pakazara, sumbu rine zvinopfuura mamirioni manomwe processor processor (katatu zvakapetwa kupfuura mutungamiri weiyo yapfuura chinzvimbo), ingangoita 5 PB ye RAM uye 150 PB yekugovana yakagovaniswa zvichibva paFS Luster.
Zvakare, zvakakosha kutaura izvozvo iyo inoshanda sisitimu iri kubata iro rese simba iRed Hat Enterprise Linux.
Kechipiri, tinogona kuwana kune iyo IBM-yakaendeswa sumbu ku Oak Ridge National Laboratory (USA.). Sumbu inomhanya Red Hat Enterprise Linux, inosanganisira 2,4 miriyoni processor cores (uchishandisa 9-core IBM Power22 3.07C 22GHz CPUs uye NVIDIA Tesla V100 accelerators), ichipa 148 petaflops performance.
Nzvimbo yechitatu, inowanikwa iyo American Sierra sumbu, yakaiswa kuIBM kuLivermore National Laboratory yakavakirwa papuratifomu yakafanana neSummit uye ichiratidza mashandiro padanho re94 petaflops (anenge 1,5 miriyoni cores).
Nzvimbo yechina, iyo Chinese Sunway TaihuLight sumbu, iyo inoshanda muChina yenyika supercomputer centre, iyo inosanganisira anopfuura mamirioni gumi macores uye inoratidza kuita kwe10 petaflops. Kunyangwe iri padhuze kuita, iyo Sierra cluster inoshandisa hafu yesimba reSunway TaihuLight.
Nzvimbo yechishanu iboka reChinese Tianhe-2A, iyo inosanganisira angangoita mamirioni mashanu cores uye inoratidza kuburitswa kwema 5 petaflops.
Pakati pemasumbu matsva akaonekwa mukati megumi gumi, HPC10 (Italy, Dell EMC, 5 petaflops, 35 zviuru cores) uye Selene (USA, 669 petaflops, 27 zviuru cores) zvinotaurwa, izvo zvakatsiva boka reUS Border. (Dell EMC, 277 petaflops, 23).
Uye mune iyo yeItaly Marconi-100 cluster (IBM, 21.6 petaflops, 347 zviuru cores) yaive pachinzvimbo chechipfumbamwe, uye boka reSwitzerland Piz Daint (Cray / HPE, 21.2 petaflops, 387 zviuru cores), iri panzvimbo yechitanhatu mune yapfuura chiyero ikozvino chinzvimbo chegumi.
Kugovera nenhamba yevanotamba nenjodzi munyika dzakasiyana ndeinotevera:
China yaive pasi: 226 (zvichienzaniswa ne228 mwedzi mitanhatu yapfuura). Pakazara, maChinese mapoka anogadzira 45,2% yezvose zvinogadzirwa (mwedzi mitanhatu yapfuura, 31,9%).
United States yakadonha 114 (zvichienzaniswa ne117 mwedzi mitanhatu yapfuura). Kubudirira kwese kunofungidzirwa pa22.8% (mwedzi mitanhatu yapfuura - 37.8%).
Japan inoramba yakafanana ne29
France yakawedzera imwe 19
Germany inoramba iine gumi nematanhatu
Netherlands inoramba iine gumi nemashanu
Ireland inoramba iine makore gumi nemana
Canada yakawedzera kusvika pa12 ichienzaniswa ne9 mwedzi mitanhatu yapfuura
Britain yakadzika kusvika gumi
Italy yakawedzera kusvika pa7
Brazil yakawedzera kusvika ku4
Singapore inoramba iri 4
South Korea, Saudi Arabia, Norway inoramba iri pa3
Russia, India, Australia, United Arab Emirates, Switzerland, Sweden, Finland, Taiwan inoramba iri pa2.
Mune chinzvimbo cheanoshanda masisitimu anoshandiswa mumakomputa makuru, Linux chete ndiyo yasara kwemakore matatu akateedzana. Kubva pane kugoverwa mukushandiswa kweino Linux gore rekugovera.
54.4% (49.6%) haitsanangure kugovera
24.6% (26.4%) shandisa CentOS
6.8% (6.8%) - Cray Linux
6% (4.8%) - RHEL
2.6% (3%) - SUSE
2,2% (2%) - Ubuntu
0.2% (0.4%) - Sayenzi Linux
Ukuwo, yemaitiro anonakidza kwazvo, zvinotaurwa kuti sumbu SberCloud ine 6.6 petaflops uye uchishandisa Ubuntu 18.04. Iyi yakagadzirwa naSberbank pane iyo NVIDIA DGX-2 chikuva, inoshandisa iyo Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz CPU uye ine 99,600 cores) yakabva kubva 29 kusvika 36th mune chinzvimbo chemwedzi mitanhatu.
Kupedzisauye kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani nyowani yepamusoro 500, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mune 55th edition yevanopfuura mazana mashanu, Japan ndiye mutungamiri uye anoshandisa ARM
Prison Architect ine chakakosha dhisikaundi uye inotangisa Island Bound